↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ အရေးကြီးအပင်များ၏ ရုက္ခဗေဒဆိုင်ရာအမည်များနှင့် မျိုးရင်းအမည်များ(English) (PPD Myanmar). Retrieved 11 February 2020
↑ ၂.၀ ၂.၁ ၂.၂ POWO (2019). Plants of the World Online. Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet; http://www.plantsoftheworldonline.org/ Retrieved 11 February 2020
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အကေးရှားပင်&oldid=502887" မှ ရယူရန်
၁၁ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၀၊ ၁၀:၂၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၁၁ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၀၊ ၁၀:၂၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။